कपिलवस्तुमा ट्याक्टर पल्टिँदा एक जनाको मृत्यु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कपिलवस्तुमा ट्याक्टर पल्टिँदा एक जनाको मृत्यु
कपिलवस्तु । ट्याक्टर पल्टिँदा कपिलवस्तु नगरपालिका–९ कुश्मामा गएराति एक जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीयवासी ४० वर्षीय श्याम यादवको दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो।
कुश्माघाटबाट कुश्मातर्फ आउँदै गरेको लु ३ त ५२१६ नं को ट्याक्टर पल्टिँदा त्यसमा सवार यादवको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्याक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा छ। चालक फरार छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावलले जानकारी दिए।